IPalmyra, isimangaliso sogwadule lwaseSyria | Izindaba Zokuhamba
Enric Gili | | General, Yini ongayibona, Syria
Namuhla ngizokutshela ngomunye wemizila ethakazelisa kunazo zonke engake ngazenza, Palmyra. Uhambo olungathathwa njengokungajwayelekile nokuthi njengamanje alunakwenzeka ngenxa yokuhlaselwa kwamaphekula okuqhubekayo endaweni. Imayelana nedolobha lasendulo lasePalmyra, amanxiwa amangalisayo emivubukulo ogwadule lwaseSiriya.
IPalmyra yamenyezelwa njengeGugu Lomhlaba ngo-1980. Itholakala ogwadule futhi eduze ne-oasis, ingenye ye- izinsalela ezibaluleke kakhulu zemivubukulo ezisalondoloziwe ngaphandle kokuhlaselwa yi-DAESH (Islamic State) kanye nokubonakaliswa kwawo wonke amasiko nezikhathi ezazihlala kule ndawo phakathi namakhulu eminyaka.
Okunye okutholwe yimivubukulo kubonisa ukusungulwa kwedolobha cishe eminyakeni eyinkulungwane yesibili BC kanye nezinsalela zeNeolithic ezitholakele.
Ngaphambi kwempi yombango nokuhlaselwa kwe-ISIS, iPalmyra yayingenye yezindawo ezinhle kakhulu eMiddle East naseSyria.
1 Ungafika kanjani ePalmyra?
2 Yini okufanele uyenze ePalmyra?
Ungafika kanjani ePalmyra?
Impela umbuzo wokuqala kufanele ube "Kungenzeka yini ukuya ePalmyra njengamanje?" bese impendulo ithi CHA. Kungcono ukuyivakashela lapho kunokuthula esifundeni.
Noma kunjalo, ukufika ePalmyra kungenzeka kuphela ngomgwaqo, ngemoto noma ngebhasi. Umgwaqo uxhuma ngqo enhlokodolobha yaseSyria IDamaseku nePalmyra, etholakala cishe ku-220Km futhi cishe amahora amane wokuhamba. Angazi intengo yokwenza lolu hambo ngetekisi, njalo kufanele uhlangane.
Yize ngiyindawo yezivakashi ebaluleke kunazo zonke ezweni, mina Ngincoma ukuthi uhambe ne-ejensi nomhlahlandlela, ibanga lide futhi iningi lama-poster lingesi-Arabhu.. Kunamahhotela amaningana okuhlala lapho.
Ihhotela elihamba phambili yiZenobia Cham Palace, okuyiyo yodwa ebekwe phambi kwamanxiwa futhi eyakhiwa ngo-1930 ngabantu baseYurophu, u-Countess Marga D'Andurain nomlingani wakhe uPierre. Ihhotela elihle, intengo eyamukelekayo, ukwelashwa okulungile nendaba efanele amanoveli amahle kakhulu. Lapho ungathola ukuthi kungani.
Yini okufanele uyenze ePalmyra?
Amanxiwa akhona eduze komuzi wanamuhla onegama elifanayo futhi banokunwetshwa okukhulu. Iningi lazo lingavakashelwa ngezinyawo, kepha kukhona amanxiwa (imibhoshongo yomngcwabo) etholakala ezindaweni eziphakeme noma ezikude kakhulu ezidinga imoto ukufika lapho.
IPalmyra ayiveli ngokukhethekile ngento eyodwa, iqoqo lonke. Idolobha lonke ligcinwe kahle kakhulu ngamakhulu eminyaka elakhiwa ngalo, izimpi, ukuhlaselwa nezikhathi ebeliziphile.
Ngincoma ukuthi ushiye ihhotela ekuseni kakhulu bese uqala ukuhamba uzungeze amanxiwa emivubukulo. Ehlobo amazinga okushisa angafika kalula ku-40ºC, alethe amanzi nezingubo zokunethezeka zokuhamba. Vakashela lonke idolobha lasendulo ekuseni kuthi emini noma ntambama uye esiGodini samathuna. Uma unesikhathi bengingahamba futhi ngihambe idolobha lanamuhla lasePalmyra.
Ngalokho kusho, asikwazi ukushiya iPalmyra ngaphandle kokubona okulandelayo:
Ithempeli likaBel (noma uBhali): isikhathi esiguqulwe saba isonto elingcweliselwe inkolo kaBel, unkulunkulu ophakeme waseMesopotamiya, futhi lakhiwa ngo-32 AD Labhujiswa nguDAESH. Ngaphambi kokuhlaselwa kwakuthathwa njengethempeli eligcinwe kahle kakhulu ePalmyra. Manje bayakha kabusha.
Amathempeli ka-Baalshamin, Nabu, Al-lat no-Baal-Hamon, futhi etholakala ngaphakathi kwedolobha futhi yakhiwa phakathi kwekhulu lokuqala nelesibili emva kukaKristu.
I-eksisi enkulu yedolobha: ingumbukiso obabazekayo ongaphezu kwe-1km owawusebenza njengomgwaqo omkhulu wePalmyra kusukela ngekhulu lesi-2 AD futhi wawusetshenziswa ngabantu bendawo, abathengisi nabanye. Impela yisithombe esaziwa kakhulu saleli dolobha emhlabeni.
Inkundla yemidlalo yaseshashalazini yamaRoma: ingenye yezinkundla zemidlalo yaseshashalazini zamaRoma ezigcinwe kahle kakhulu emhlabeni. Eyakhiwa ngekhulu lesi-XNUMX AD, lapho iPalmyra yayingaphansi kokubusa koMbuso WaseRoma.
Isigodi samathuna: amakhilomitha ambalwa ukusuka edolobheni elidala futhi eduze kwezintaba kunemibhoshongo eminingana yemingcwabo. Omunye wabo ngumbhoshongo i-Elahbel, kusukela ngekhulu lokuqala AD, futhi usesimweni esifanelekile sokulondolozwa. Ungavakashela ingaphakathi lalo futhi ubone ukwakheka okuhle nemidwebo.
Lapho ukuthula sekubuya eSyria, mina Ngincoma ukuthi uye ePalmyra ngaphandle kokungabaza.
Ngaba nenhlanhla yokuthi ngikwazi ukumvakashela isigamu sonyaka ngaphambi kokuqala kwempi yombango. Ngaleso sikhathi izwe lalibonakala livulekela umhlaba, izinkampani eziningi zaseNtshonalanga zase ziqala ukuba khona eSyria. Kunginike umuzwa wokuthi abantu bebonke bajabule ngesimo esikhona ezweni futhi bayathanda ukuthi ezokuvakasha ziqale ukusivakashela. Ngokusobala ngishiye nginomuzwa ongahambisani neqiniso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » IPalmyra, isimangaliso sogwadule lwaseSyria